Ababhalisi abazizigidi ezili-165 baneSpotify | Ndisuka mac
Ngelixa iApple ichithe ngaphezulu kweminyaka emibini sngokuhlaziya inani lababhalisi benkonzo yakho yokusasaza umculo, I-Apple Music, inkampani yaseSweden i-Spotify iyaqhubeka nokwandisa inani labasebenzisi, zombini ezihlobo lwasimahla kunye nohlobo oluhlawulelweyo. Ngokwamanani akutshanje abhengezwe yinkampani, inani lababhalisi abahlawulayo zizigidi ezili-165.
Ukuba kwabo babhalisile abayi-165 yezigidi, songeza izigidi ezingama-200 zabasebenzisi benguqulelo yasimahla, siyabona ukuba iqonga laseSweden linalo Isiseko somsebenzisi esisebenzayo seenyanga ezingama-365, emele ukwanda ngama-22% xa kuthelekiswa nelo xesha linye lonyaka ongaphambili.
U-Spotify uphumelele kwezi nyanga zintathu zidlulileyo, Izigidi ezisi-7 zababhalisi abatsha abahlawulayo, Ukusuka kwizigidi ezili-158 ababenazo nge-31 Matshi ukuya kwi-165 yezigidi ukusukela nge-31 kaJuni, ngo-2021.
Ngokwenkampani, ngoku ingaphezulu kwe- 3 yezigidi zeepodcast kwiqonga layo, iqonga eliya ngokubaluleka ngokubaluleka kwaye eliya kuthi livumele inkampani ukuba, kwixesha elizayo, ibe ngumthombo wengeniso enengeniso ephezulu.
Phakathi kwabasebenzisi abasebenzisa iipodcast kwikota yesibini, iindlela zokusebenzisa zazomelele (ukonyuka kwe-95% ngonyaka-ngonyaka ngokubanzi nangaphezulu kwe-30% ngonyaka-ngomsebenzisi ngamnye), ngelixa iveki kunye nokugcinwa kweenyanga kugcinwa ngalo lonke ixesha eziphakamileyo. Ngexesha lekota, isabelo seepodcasts iiyure ezipheleleyo zokusetyenziswa kwiqonga lethu ziye zafikelela kwinqanaba elipheleleyo.
Spotify yaphawulwa ngo Injongo yokufikelela kubasebenzisi abazizigidi ezingama-400 ngenyanga ekupheleni kwalo nyaka. Kulawo ma-400 ezigidi abasebenzisi abasebenzayo, ulindele ukuba phakathi kwe-177 kunye ne-181 babhatale. Ukuba sithathela ingqalelo ukuba ikota nganye ifumana phakathi kwababhalisi abatsha abasi-7 ukuya kwi-9, uqikelelo lokukhula kweSpotify luyinyani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ababhalisi abazizigidi ezili-165 baneSpotify
Isicelo somsebenzi sikaSteve Job kwifandesi phantse amawaka amathathu eerandi
Iimaski ziphinde zanyanzeleka kwiVenkile yeApple eMelika